Ehellada dadkii ku dhintay diyaaraddii Itoobiya ee burburtay oo la sheegay in ay magdhaw culus helayaan - Halbeeg News
qeybo ka mid ah burburkii diyaaradda Itoobiya iyo ehellada dadkii ku geeriyooday oo goobta ku sugan xuquuqda sawirka: online
ADDIS ABABA(HALBEEG)-Ehellada qoysaskii ay dadkooda ku geeriyoodeen shilkii diyaaradda Itoobiya ayaa maanta billaabay in ay dib ugu laabtaan dalalkoodii.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in ay suura gal tahay in qoysaska ay dadkoodii shilkaas ku geeriyoodeen la siin doono magdhow.
Sida uu ku warramay wargeyska Daily Nation(Kenya) oo wareystay ehellada dadkii ku dhintay diyaaradda qaarkood shirkadda diyaaradaha ee Itoobiya ayaa u sheegtay in ay siin doonto magdhow u dhexeeya 170.000 oo doollar illaa 250.000 oo doollar qofkiiba.
Lucas Nzioka oo ah mid ka mid ah ehellada dadkii ku dhintay shilka qaarkood ayaa sheegay in masuuliyiinta Itoobiya ay xubnaha qoyska u sheegeen in ay heli doonaan magdhow ku salaysan heshiiskii Montreal ee magdhowyada.
“Waxaa nalagu yidhi magdhowgu wuxuu u dhexeeyaa 170.000 oo doollar illaa 250.000 oo doollar iyadoo la eegayo da’da iyo xirfadda iyo waxyaabo kale laguna salaynayo heshiiskii magdhawyada ee Montreal”ayuu yiri Lucas.
Saraakiisha Itoobiya ayaa ka gaabsaday in ay qoysaska ay dadku ka geeriyoodeen ay u sheegeen caddadka lacagaha magdhowga ah ee ay heli doonaan waxayse hoosta ka xarriiqeen in ay marsiin doonaan halbeegyada caalamiga ah.
Lacagaha magdhowga ah ayaa kordhi kara haddii baaritaannada iminka socda lagu helo in burburka diyaaradda uu sabab u ahaa cillad ka timid dhanka shirkadda.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii 157 qof oo saarnaa diyaaradda Itoobiya ay dhinteen kaddin markii ay la burburtay xilli ay u safrayeen dalka Kenya.